Ahoana ny fomba hampihenana lanja amin'ny Photoshop sy ny vokatra mahafinaritra hafa | Famoronana an-tserasera
Ahoana no mampihena lanja ny olona iray miaraka aminy Photoshop ary ny hafa vokatra mahafinaritra hamela anao izy ireo manana vatan'ny magazine noho ny iray amin'ireo fitaovana lehibe an'ny Photoshop nampiasaina hikasika ny vatan'ireo modely ary hahatratra izany vokatra "tonga lafatra" izany. Fitaovana iray izay azo ampiasaina hanovana ny vatana mitady hahatratra ny vokatra mety amin'ny indostrian'ny lamaody na azo ampiasaina hikarohana valiny tena adala.
Mianara mampiasa iray amin'ireo fitaovana lehibe an'ny Photoshop hahafahanao mamerina mametaka ny sary amin'ny endrika faran'izay madio indrindra indostrian'ny lamaody. Raha tsy tianao ny hevitra lamaody mahazoa ny fahaizanao mamorona sarimiaina mamorona isan-karazany miaraka amin'ny sarinao (na ny an'ny namanao).
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika mba hanatanterahana ireo karazana vokatra ireo dia mitady sary izay hiarahanay miasa. Aorian'izany dia hosokafantsika miaraka amin'ny Photoshop ary hanomboka hiara-hiasa aminy izahay.
ny dingana ho an'ity fampianarana ity Ireto manaraka ireto:
Sokafy ny fitaovana liquefy avy Photoshop
Safidio ny fitaovana mandroso (liquefy)
Mamorona sarontava fiarovana (liquefy)
Mampiasà safidy safotra sy mihodina (liquefy)
1 Fitaovana miavaka
2 Mamorona vokatra mahafinaritra amin'ny fitaovana liquefy
Ity fitaovana ity dia ny miandraikitra ny fanaovana ny famerenana amin'ny laoniny ny sary rehetra hitantsika amin'ny magazine sy dokam-barotra. Tsotra ny asany, mazava ny zavatra ataony Warp ny sary amin'ny fomba voafehy.
Ny zavatra voalohany ataontsika dia manapaha hevitra hoe faritra iza no hoentinay ny sarintsika.
Raha vantany vao nanapa-kevitra isika hoe faritra aiza no tadiavintsika alefa indray, ny zavatra manaraka tsy maintsy ataontsika dia ny manokatra ilay fitaovana liquefy Photoshop, ity fitaovana ity dia ao amin'ny menio ambony sivana / liquefy.
Raha vantany vao manokatra ny fitaovana tokony hataontsika isika safidio ny safidy mankany alohae (endrika rantsan-tànana) ao anatin'ny menio fanefitra liquefy, ity safidy ity dia hita eo ankavia havia.
Ao anatin'ity fitaovana ity afaka manova safidy hafa isika miankina amin'ny filan'ny tsirairay avy amintsika. Ny sasany amin'ireo safidy mahazatra indrindra dia:
habe (manampy antsika hanova ny haben'ny borosy ary hiasa tsara kokoa)
Asehoy ny sarontava (ny sarontava dia ampiasaina hiarovana faritra sasany amin'ny sary)
Asehoy ny atsy ambadika (manampy antsika ny sary any ambadika rehefa miverina miverina)
Raha hamerina tsotra izao ny sary misafidy habe borosy izahay mifanaraka amin'ny filantsika ary manomboka isika ahitsio ireo faritra tadiavintsika ireo.
Mamorona vokatra mahafinaritra amin'ny fitaovana liquefy
La fitaovana liquefy azo ampiasaina amin'ny mamorona vokatra mahafinaritra amin'ny endrika sariitatra madio indrindra. Avereno amboarina ny sarinao rehetra mamorona sary mahafinaritra izay tian'ny rehetra mampiasa fitaovana mitovy ampiasaina mba hahazoana vatana tonga lafatra.
Raha tianao ity karazana sary ity dia mila manaraka fotsiny ireto dingana manaraka ireto ianao hahafahanao manao izany amin'ny alàlan'ny fanampian'ny Photoshop.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia sokafy ny sary eto Photoshop ary safidio ny fitaovana sivana liquefy hita eo amin'ny menio ambony. Raha vantany vao misokatra ny fitaovana dia afaka manomboka mamorona ny bitika isika Frankenstein.
Misafidy ny Safidy hivoatra ao anaty fitaovana liquefy hampitombo ny haben'ny maso. Tsotra ihany ny fizotrany, aloha misafidy habe borosy izahay mety ary apetrantsika eo afovoan'ny maso ny borosy hahatratrarana inflate mifandanja.
Ny dingana manaraka dia ny manao ny mifanohitra amin'izay, esory ny sary. Misafidy ny safidio safidy ao anaty fitaovana liquefy. Amin'ity dingana ity dia mahita safidy mahaliana amin'ity fitaovana ity isika, ny saron-tava fiarovana. Ity sarontava ity dia mamela antsika arovy ny faritra iray amin'ny fomba tsy hahavoa azy amin'ny fanovana ataontsika aminy.
Araka ny hitantsika ity fitaovana ity dia ahafahantsika manao touch-up marobe izay mihoatra ny doka tsotra amin'ny fitadiavana vatana tonga lafatra. Raha te hahita a ohatra amin'ity karazana retouch ity amin'ny maha matihanina anao dia afaka mijery ity horonantsary manaraka ity ianao.
Mamela antsika ny fitaovana deformade moramora ny sitraponay ireo sary, ny fampiasana azo omena azy dia mety ho maro raha manampy fahaiza-mamorona be dia be isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fomba hampihenana lanja amin'ny Photoshop sy ny vokatra mahafinaritra hafa